यिनै हुन् रिया हिरो जो सक्रं-मितको श’व नागों हातले उठाउन समेत पछि पदैनन् ! – Yuwa Aawaj
यिनै हुन् रिया हिरो जो सक्रं-मितको श’व नागों हातले उठाउन समेत पछि पदैनन् !
जेठ ३, २०७८ सोमबार 408
सागर भण्डारी : गाउँपालिकामा कहीँ कतै को’रोनाले मान्छेको नि’धन भयो भने श’व व्यवस्थापन गर्न र गाडीमा ओसार पसार गर्न मान्छे डराउँछन् । कतिपय ठाउँमा २/३ दिन सम्म सक्रं’मितको श’व नउठेको पनि खबरहरु सुनिन्छन् ।
तर बाग्लुङको बडिगाड गाउँपालिकाका राजन पाईजा यो काममा अगाडी सर्छन् । श’व कतैबाट लिएर आउन परे वा कतै लैजान परे सबैले पहिलो उनको अनुहारमा हेर्छन् । पाईजा गाउँपालिकाका कर्मचारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हैनन् न कि कुनै अभियान्ता । तर उनले विगत लामो समय देखि यसक्षेत्रमा नि’स्वार्थ सहयोग र सेवा गर्दै आईरहेका छन् ।
हरेक परिस्थितिमा हरेक वि’पतीको सामना गर्न र गाउँबासीको जीवनरक्षा’का लागि अ’होरा’त्र लागि पर्ने उनको सेवा भाव देखेर सबै गाउँले नै अचम्म मान्छन् । स्थानीय कमल खरेल भन्छन् : उहाँलाई थकान र पीडाको अनुभुत नै छैन् आफु भित्रका पी’डा लुकाएर भएपनि सधै गाउँबासीको सेवामा लागि पर्नुहुन्छ । यतिसम्मकी राति जतिबेला पनि कसैले केही समस्या पर्यो भनेर फोन गरे उहाँ जुरुक्कै उठेर सहयोगमा उ’त्रि’नुहुन्छ ।
गाउँबासीको सेवा र सहयोग गरेकै कारण यति माया पाएका पाईजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयरसिहं पाईजाका छोरा हुन् । उनले आफु अध्यक्षको छोरा भएको है’सियतले भन्दा पनि गाउँका वि’पत्तिमा सबै गाउँबासीलाई नै परिवार सम्झेर सहयोग गर्छन ।
कोरो’ना सक्रंम’णको बेलामा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखासगं दिनरात खटेर गाउँगाउँमा पुगेर स्वाव सकंलन, क्वारे’न्टाईन व्यवस्थापन, आई’सुलेसन व्यवस्थापन र राहत वितरणमा समेत उनी उत्तिकै सक्रिय रहे ।
मलाई कुनै पद या प्रति’ष्ठा भन्दा पनि आफ्ना नागरिकको सेवामा खटिन पाउँदा आनन्द मिल्छ । गाउँमा अहिले त युवा पनि छैनन् सबै युवा वर्ग विदेशमा छन् कति वसाईँसराई गरेर बाहिर गईसके । हामीले नगरे कसले गर्ने उनले भने ।
पाईजा सामाजिक काममा सक्रिय भएको देखेर गाउँपालिकाका कर्मचारी समेत छक्क पर्छन् । गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी बुद्ध पाण्डे भन्छन् : राजन दाईको सेवा भक्ति देखेर हामीलाई नै आश्चर्य लाग्छ । कतिबेला कहाँ के हुन्छ,जहाँ पनि भै’परिमा अगाडी सरेर सेवा र उ’द्धारमा लाग्ने मान्छे प्राय उहाँ बाहेक कम नै छन् ।
गाउँबासीको दु:खको सहारा बनेका उनी जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सामना गरि सेवा भावमा उत्रिन्छन् । केही दिन अगाडी को’रोना सक्रं’मितको श’व कसैले उठाउन नमानेपछि उनले आफैले ना गों हातले उठाएर बाग्लुङबाट ल्याएका थिए । त्यस्तै उनले अक्सिजन आफनो बाईकमा बोकेर विरामीको घरघरमा पु¥र्याउँछन् ।
अहिले कोरोनाको नयाँ भेरि’यन्ट अलि जटिल प्रकारको छ प्राय विरामीहरु घरमै आईसो’लेसनमा हुनुहुन्छ,कतिपयले एक्कासी स्वास फेर्न गाह्रो भो भनेर भन्नुहुन्छ अनि बाईकमै अक्सि’जन र आवश्यक सामाग्री बोकेर दुगु’रिहाल्नुपर्छ उनी भन्छन् ।
२०४२ सालमा जन्मिएका पाईजा सानोमा भने खेलकुदमा औद्यी रुची राख्थे । अध्ययन भन्दा पनि खेलकुद नै प्राथ’मिकता मानेका उनलाई खेलकुदले नै सफलता पनि दिलायो । अहिले उनी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको रुपमा परिचित छन् । उनी करातेका खेलाडी हुन् ।
विभिन्न सघं’संस्थामा आ’बद्ध रहेका उनले हाल बडिगाड गाउँपालिकामा बडिगाड क’राते डोजो नामक संस्था खोलि यस क्षेत्रका स्थानीयलाई क’राते खेल सिकाउँछन् । उनी यस संस्थाको अध्यक्ष समेत हुन् ।
त्यस्तै खेलाडी तगा प्रशिक्षक सघं बाग्लुङको जिल्ला अध्यक्ष र खेलकुद महासघं केन्द्रीय सचिवालय सदस्य समेत रहेका पाईजालाई अहिले भने खेलकुदमा भन्दा समाजसेवामा आनन्द मिल्छ । मेरो पेसा त खेलकुद नै हो यही क्षेत्रलाई अगाडी बढाउँछु,
मेरो रुचीको अर्को विषय समाजसेवा हो म बाँचुञ्जेल यी दुईबाट टाढा अवश्य रहनेछैन् । पाईजाले भने ।
बुबा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको कारणले गरेको हो भनेर पनि भन्छन् नी भन्ने प्रश्नमा उनले बुबालाई सहयोग गर्ने
स्वभाविक रहेको भएपनि आफु निश्वार्थ रुपमा यस क्षेत्रमा लागेको र लागिरहने बताए । भन्नेका अगाडी त के गर्न सकिन्छ र मेरो काम अरुलाई देखाउनका लागि होईन्,कसैले यस्तो भनिदियोस भन्नका लागि पनि होईन् केबल मेरो आत्मस’न्तुष्टीका लागि मात्रै हो ।
Prevमहाबिर पुनको चमत्कार अक्सिजन सिलिण्डरमा गरे नयाँ आबिस्कार ।(भिडियो सहित)
Nextनेपाली जनताको लागि रबि लामिछाने,रमेश प्रसाई मिलेर यस्तो काम गर्दै छन ।
३९ पत्नी र २ सय सन्तान भएका यी पुरुष रहेनन् !
तार विना चार्ज गर्न मिल्ने आइप्याड बजारमा आउँदै ।
आजदेखी निषेधाज्ञा उल्ल-ङ्घन गर्नेलाई १ महिनासम्म कै’द ।